30-ka Shaqooyinka ugu Lacag Bixinta Badan ee Qalin jabinta Mareykanka 2021 Cusboonaysiinta: Wararka Dugsiga ee Hadda
30-ka Shaqooyinka ugu Lacag Bixinta Badan ee Ka Qalinjabiya Ameerika 2021 Cusboonaysiinta
Filed in Education by Shaqaalaha tifaftirka Juun 18, 2021
Hoos waxaa ku yaal liiska shaqooyinka ugu mushaharka badan ardayda ka qalin jabisay Mareykanka. Sida lagu sheegay warbixintii ugu dambaysay ee Glassdoor.com, dhakhaatiirta iyo waaxda qareenada ayaa wali ah xirfadlayaasha ugu dakhliga badan qaranka. Marka lagu qiimeeyo tan, shaqooyinka caafimaadka iyo sharciga waxay umuuqdaan kuwa faa'iido dhaqaale badan leh. Faahfaahin ka raadi hoos.
Si loo soo ururiyo liistada Shaqooyinka Bixinta ugu Fiican ee Qalinjabinta Mareykanka ee 2021, websaydhku wuxuu falanqeeyay xogta mushaharka joogtada ah ee aan la garanayn ee isticmaalayaasheeda.
Si jagada shaqo ay ugujirto liiska, waa inay jirtaa uguyaraan todobaatan iyo shan warbixinood oo kusaabsan shaqada lasoo gudbiyay sanadkii lasoo dhaafay. Shaqooyinka heerka C ayaa laga reebay warbixinta.
Shaqooyinka Bixinta Ugufiican ee Qalinjabinta
Waa kuwan soddonka shaqo ee ugu mushaharka badan, oo ku saleysan liistada Glassdoor.com:
Fadlan ogow in mushaharku yahay celcelis ahaan sanadkiiba.
Celceliska mushaharka: $ 180,000
Marka hore liistadayada shaqooyinka ugu mushaharka badan ardayda qalin jabisa. Daawo ma aha oo kaliya shaqada ugu mushaharka badan gudaha Mareykanka, qorista iyo baahida dhakhaatiirta caafimaadka ayaa la saadaalinayaa inay ka fiicnaato 14% laga bilaabo 2014 ilaa 2024.
Tani waa labanlaab celceliska la saadaaliyay ee shaqooyinka oo dhan, sida lagu sheegay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha.
Celceliska mushaharka: $ 144,500
Marka labaad, liiskayaga shaqooyinka ugu mushaharka badan ardayda qalin jabisa In kasta oo mushaharku ku kala duwanaan doono iyadoo loo eegayo qaybta sharciga ee aad ugu weyn tahay. Celceliska mushaharku waa mid muhiim ah oo ku filan si sharci looga dhigo shaqada labaad ee ugu mushaharka badan Ameerika. Intaa waxaa dheer, bogga liiska shaqada ee Glassdoor wuxuu muujinayaa qiyaastii 9,000 furitaan shaqadan.
Celceliska mushaharka: $ 142,120
Maamulayaasha cilmi baarista iyo horumarinta waxay leeyihiin faafid doorar ku tiirsan hogaamiyaha, laga bilaabo qaabka wax soo saarka iyo hogaaminta iskaashiyo cusub si ay u kormeeraan shaqaalaha.
4. Maareeyaha Horumarinta Barnaamijka Kombuyuutarka
Celceliska mushaharka: $ 132,000.
Tani dhab ahaantii waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan ardayda qalin jabisa. A Maamulaha horumarinta barnaamijka kumbuyuutarka kobciyaa oo kormeeraa nidaamka barnaamijka kombiyuutarka. Rajada shaqadan waa mid ifaya; waxaa lagu qiyaasaa inuu korayo laga bilaabo 2014 ilaa 2024.
5. Maareeyaha Farmashiyaha
Celceliska mushaharka: $ 130,000
Sanado khibrad ah oo lagu daro Ph.D ayaa badanaa loo baahan yahay. Farmashiistayaasha ayaa laga filayaa inay tan yeeshaan.
6. Maareeyaha Istaraatiijiyadda
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan ee mushaharka sii kordhaya ee ardayda qalin jabisa. Maamulayaasha istiraatiijiyadda ayaa sida caadiga ah kormeera qorshayaasha shirkadeed ee lagu horumarinayo iskaashiga, kor u qaadista kobcinta iyo soo bandhigidda dadaallada cusub ee macaash-wadista. Shahaadad ayaa loo baahan yahay, inyar oo loo shaqeeyayaashu sidoo kale waxay u baahan yihiin mastar, liisaska Glassdoor ayaa muujiyay.
7. Naqshadeeyaha Barnaamijka Conputer
Celceliska mushaharka: $ 128,250
Naqshadeeyayaasha barnaamijka kombiyuutarka waxay soo saaraan barnaamijyo waxayna ula xiriiraan qorshooyin farsamo hoggaamiyeyaasha shirkadda. Shahaadada koowaad ee cilmiga sayniska mararka qaarkood ayaa loo baahan yahay.
8. Injineerka Naqshadaynta Qalabka Kombuyuutarka
Celceliska mushaharka: $ 127,500
Injineerada naqshadeynta kumbuyuutarka waxay siiyaan naqshad koronto iyo taageero horumarineed waxayna xalliyaan arrimaha qalabka farsamada. Haysashada B.Sare. ama M.Sc ee injineernimada korontada waa wax caadi ah.
9. Maareeyaha Teknolojiyada Macluumaadka
Celceliska mushaharka: $ 120,000
Maamulayaasha tiknoolajiyada macluumaadka waxay caddeeyaan in mid kasta oo ka mid ah qalabkooda shirkadeed, barnaamijyada kombiyuutarka, iyo shabakadaha ay ku shaqeeyaan dabaasha iyo inay fuliyaan yoolalka IT-da ee ururka. Maamulayaasha IT-da mararka qaarkood waxay leeyihiin shahaado gudahood goobta lagu daro xirfado farsamo oo fara badan.
10. Naqshadeeye Xal
Xalka naqshadaha ayaa hogaamiya ama fududeeya qaabeynta alaabada iyo waxqabadyada. Si kastaba ha noqotee, waxay inta badan ka walaacsan yihiin dhinaca farsamada sameynta iyaga. Shuruudaha waxbarashadu way kala duwan yihiin, laga bilaabo shahaadada Sayniska Kombiyuutarka ama nidaamyada IT-ga illaa sayidka sayniska ama injineernimada.
11. Hawlgelinta Manaager
Waxay masuul ka yihiin cilaaqaadka macaamiisha. Doorka wuxuu ubaahanyahay xirfado iibinta iyo maaraynta mashruuca. barnaamijyada ama xirfadaha farsamada ayaa laga yaabaa inay ku caawiyaan.
12. Maareeyaha Codsiyada
Maamulayaashani waxay kormeerayaan oo ay hagaajinayaan nidaamyada gudaha iyo koodhka kombiyuutarka. Shahaado iyo dhowr sano oo kale oo khibrad ah oo goobta dhexdeeda ah ayaa loo baahan yahay.
Celceliska mushaharka: $ 118,000
Farmashiyayaashu waxay helaan mushaar fiican. Si kastaba ha noqotee, waxay heli doonaan saacado badan waxaana la filayaa inay shaqeeyaan isbuucyada dhammaadka usbuucyada. Haysashada shahaadada dhakhtar ayaa loo baahan yahay.
14. Naqshadeeye Nidaam
Celceliska mushaharka: $ 116,920
Naqshadayaashani waxay dhisaan oo ay dayactiraan macluumaadka shirkadda, barnaamijyada barnaamijyada, iyo barnaamijyada. Shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama shahaadada tacliimeed ee injineernimada, sayniska la adeegsaday, ama goob isku xiran ayaa loo baahan yahay.
15. Maareeyaha Maaliyadda
Celceliska mushaharka: $ 115,000
Caadi ahaan waxay leeyihiin 5 ama sannado badan oo khibrad u leh dhaqaalaha, xisaabaadka, ama goob ku xiran, oo lagu daro shahaadada.
16. Falanqeeyaha xogta
Saynisyahannada kombiyuutarka iyo falanqaynta macluumaadka waxay xalliyaan arrimaha horumarsan ee xisaabinta. Shaqada shaqadan ayaa la saadaalinayaa inay kororto kow iyo toban boqolkiiba laga bilaabo 2014 ilaa 2024, taas oo ka dhaqso badan tan caadiga ah.
17. Maareeyaha Halista
Maamulayaasha halista waxay la dagaallamaan caymiska, mas'uuliyadda, iyo u hoggaansanaanta sharciga. Hawlaha shaqada iyo baahiyaha waxbarashadu aad bay u kala geddisan yihiin, iyagoo sharad ku leh ganacsiga.
18. Isuduwaha Hal abuurka
Maamulayaasha hal abuurka ah waxay fuliyaan dadaallada iibinta cusub ee urur, taasoo horseedeysa cuqdad iyo qaab. baahiyaha hawshu way kala duwan yihiin, hase yeeshee xusuus-qorka hoggaanka ayaa caawinaysa.
17ka Hay'adaha Sirdoonka ee ugu sareeya United States
Shuruudaha Shahaadada Waxbarashada Carruurnimada Hore
Sida Loogu Bilaabo Ganacsi Mini Real Estate ee Nigeria Shati
Sababaha Ay Ardayda Ugu Heli Karaan Shahaadada Machad Waxbarasho Oo Online Ah
30 Siyaabaha Qaaska ah ee Lacagta looga Sameeyo Koonfur Afrika 2018
Ururada lafagura halista lacageed iyo hubanti la'aan. Shaqaalaynta hawl-wadeennada waxaa la filayaa inay koraan sideed iyo toban pc laga bilaabo 2014 illaa 2024, BLS ayaa leh.
20. Qorsheeyaha Macluumaadka
Celceliska mushaharka: $ 113,000
Dhismayaasha xogta waxay soo saaraan khariidado farsamo iyo tiknoolajiyad urur. Jagadu badanaa waxay ubaahantahay xirfado farsamo iyo / ama BS oo ku saabsan sayniska la adeegsaday ama nidaamyada macluumaadka.
21. Maareeyaha Canshuuraha
Celceliska mushaharka: $ 110,000
Maamulayaasha canshuuraha waxay diyaariyaan canshuur celinta federaalka iyo tan gobolka ee dadka iyo ganacsiyada. Ku xirnaanshaha Nursing college nin ama shahaadada qalin-jabinta ee xisaabinta ayaa loo baahan yahay.
22. Maareeyaha Alaabta
Celceliska mushaharka: $ 107,000
Maamulayaashani waxay muhiim u yihiin kooxda horumarinta wax soo saarka hay'adda, iyagoo u adeegaya sidii loo hubin lahaa in alaabooyin cusub oo lagu soo diyaariyey waqtigooda. Waxaa jira in kabadan 7,000 shaqo-abuuris loogu talagalay booskan.
23. Maareeyaha Naqshadeynta
Celceliska mushaharka: $ 106,500
Naqshadeeyayaasha naqshadeeyayaasha aagga ee lagula xisaabtamayo sawirka maskaxda iyo ciqaabta dilka macmiil ama khibradda macmiilka ee urur Waajibaadyadu way ku kala duwan yihiin warshadaha oo dhan.
24. Maareeyaha Falanqaynta
Celceliska mushaharka: $ 106,000
Shaqadani waxay u baahan tahay khibrad xagga tirakoobka iyo falanqaynta macluumaadka ah. Jagadani waxay leedahay kumanaan shaqo oo furan.
25. MAAREEYAHA NIDAAMKA INFO.
Kaalintaani waa mid balaaran marka laga hadlayo xilalka. Maamulayaasha 'Infosystems' 'waxay kormeeraan macluumaadka nooc kasta oo ay yihiin shirkadda.
Celceliska mushaharka: $ 95,710
Waxaa lagu qiyaasaa inuu koro 9 boqolkiiba.
27. Falanqeeyaha Amniga Xogta
Celceliska mushaharka: $ 92,600
Nabadgelyada internetka ayaa lagama maarmaan u ah sidii hore. Qiyaasta koritaanka ee 10 boqolkiiba.
28. Lataliyaha dhaqaalaha
Celceliska mushaharka: $ 90,530
29. Maamulaha dhismaha
Celceliska mushaharka: $ 89,300
30. Dhaqtarka xoolaha
Celceliska mushaharka: $ 88,770
Maxaad ka qaadanaysaa arrintan? Waxaan rumeysanahay in maqaalkani uu waxtar lahaa, haddii ay haa tahay, ha ka waaban inaad la wadaagto macluumaadkan saaxiibbadaa Facebook, Twitter, Whatsapp, iyo Google plus.
Shaqooyinka Ugu Mushaharka Badan Nigeria 2021 Eeg Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa
Shaqooyinka ugu Lacagta Badan ee Mareykanka loogu talagalay Qalinjabinta sanadka 2021
50ka Shaqadood ee ugu mushaharka badan ee haysta Shahaadada Bachelor-ka ee 2020
Qiimeynta Wacyigelinta iyo Adeegsiga Sharciga Xorriyadda Macluumaadka, 2011, ee ay soo saareen Weriyeyaasha Warbaahinta 'ee Gobolka Kogi
Qorista Shaqaalaynta Golaha Maareynta Mowjadaha Qaranka 2021/2022 Foomka Codsiga
Ka codso Hada EGINA Shaqada Bannaanka UFR Injineerka Rakibaadda
Dalbo amaahda ardayda ee Chase Bank 2021
Tags: shaqooyinka ugu mushaharka badan adduunka 2021, shaqooyinka ugu mushaharka badan USA 2021, shaqooyinka ugu mushaharka badan shahaado la’aan, shaqooyinka ugu mushaharka badan adduunka 2020, ugu sareeya 100 shaqooyinka ugu mushaharka badan
Bmasterz wuxuu leeyahay,
July 27, 2018 at 10: 04 pm
Waxay u egtahay sida maqaalkan aniga la iigu talo galay
« Ogeysiisyada Xiriirinta Duulimaadyada Ugu Fiican ee Nigerian - Gudaha iyo Caalamiga
Qormada Xallinta Dhibaatada, Fiiri Tallaabada Tusaha Tallaabada iyo Tusaalaha »